Football Khabar » बार्यन म्युनिखले निकाल्यो २३–० को जित : पाँच खेलाडीको ह्याट्रिक !
बार्यन म्युनिखले निकाल्यो २३–० को जित : पाँच खेलाडीको ह्याट्रिक !
जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखले मैत्रीपूर्ण फुटबलमा निकै फराकिलो जित निकालेको छ । गत राति प्रि–सिजनअन्तर्गत भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा बार्यनले तल्लो श्रेणीको जर्मन क्लब रोताक एगर्नमाथि २३–० को फराकिलो जित निकालेको हो ।
बार्यनलाई फराकिलो जित दिलाउनेक्रममा ५ जना फरक–फरक खेलाडीले ह्याट्रिक गरे भने १० फरक–फरक खेलाडीले गोल गरेका थिए ।
जसमा मिडफिल्डर कोरेन्टिन टोलिसोले सर्वाधिक ४ गोल गर्न सफल भए । एक गोल भने आत्मघाती भएको थियो ।
बायर्नले खेलको छैटौं मिनेटमा रेनाटो सान्चेजको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । बार्यनका लागि रोवर्ट लेवान्डोस्की, टोलिसो, थोमस मुलर, वार्डिट र गोरेट्जाले ह्याट्रिक गरे ।
बार्यनले पहिलो हाफमै ११–० को अग्रता लिएको थियो । बार्यनका लागि सान्चेजले खेलको छैटौं र २०औं मिनेटमा सान्चेजले गोल गरे । डाजाकुले सातौं मिनेटमा गोल गरे ।
त्यसैगरी, ह्याट्रिक गरेका लेवान्डोस्कीले खेलको नवौं, १६औं र २९औं मिनेटमा गोल गरे । त्यसपछि सर्ज गनाब्रीले ३४औं मिनेटमा गोल गरे । त्यसपछि टोलिसोले ३८औं मिनेटदेखि ४२औं मिनेटसम्म हरेक मिनेटमा १–१ गोल गर्दै ४ मिनेटमा ४ गोल गरे । उनको ४ गोलपछि बार्यन पहिलो हाफमा ११–० ले अघि रह्यो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा पनि बार्यनले गोलको वर्षा गरायो । थोमस मुलरले खेलको ४९औं, ६१औं र ८८औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक गरे ।
त्यसपछि खेलको ५५औं, ७७औं र ८३औं मिनेटमा क्वासी ओकेरले गोल गर्दै ह्याट्रिक गरे भने सप्रित सिंहले ५९औं मिनेटमा गोल गरे ।
बार्यन त्यत्तिमै रोकिएन । उसका लागि गोरेट्जाले खेलको ६३औं, ६७औं र ७३औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक गरे । त्यसपछि खेलको ७३औं मिनेटमा बार्यनले १ उपहार गोल पायो । त्यसपछि ८१औं मिनेटमा एलेक्जेन्डर नोलेन्वर्गरले गोल गरेपछि बार्यनले खेल २३–० ले जित्यो ।
रोताक एगर्न त्यही क्लब हो, जसलाई बार्यनले गत सिजन पनि मैत्रीपूर्ण खेलमै २०–२ ले हराएको थियो । यसपटक उसले गत सिजनको भन्दा फराकिलो जित निकाल्यो ।
प्रकाशित मिति २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०३:०३